Tụgharịa foto ka ọ bụrụ PDF n'efu: ibe weebụ kacha mma | Nzukọ mkpanaka
Daniel Terrasa | 03/10/2021 12:00 | Mmemme
Ma na kọmpụta ma na ekwentị mkpanaaka anyị enwere ọtụtụ onyonyo anyị na -ele, na -ebudata ma ọ bụ na -eziga kwa ụbọchị. Na post a, anyị ga -enyocha weebụsaịtị na ngwa anyị nwere iji mee ihe gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF.
Kedu ihe bụ ebumnuche ịme ụdị mgbanwe ndị a? Dị ka ọ na -adịkarị, anyị na -esi n'ụdị onyonyo JPG, PNG ma ọ bụ GIF gaa na otu PDF n'oge a na -ebi akwụkwọ. Ọ ga -ekwe omume na anyị ga -eme ya mgbe anyị na -ebunye ụfọdụ ụdị akwụkwọ gọọmentị (usoro a na -anabatakarị bụ .pdf). Maka ebumnuche ndị a na ndị ọzọ, anyị nwere mmasị ịmara ụzọ dị adị iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF.
Nke a bụ ụzọ atọ dị iche iche iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF: site na mmemme etinyere na kọmpụta anyị, site na webụsaịtị ma ọ bụ iji ngwa maka ekwentị mkpanaaka. Na nke ọ bụla n'ime ụzọ atọ a, anyị na -ewetara gị nhọrọ ole na ole. Yabụ ị nwere ike họrọ nke ga -adabara gị.
1 Mmemme iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF
1.1 Ihe Ntụgharị Altarsoft PDF
1.2 Ihe Ntụgharị PDF IceCream
1.3 JPG ka Ihe Ntụgharị PDF
1.4 Ihe ntụgharị PDF nke TalkHelper
2 Weebụsaịtị maka onyonyo n'ịntanetị ka ntụgharị PDF
2.3 Foto dị na PDF Ihe Ntụgharị
2.4 Obere mpempe
3 Ngwa mkpanaka
3.1 Nyocha Evernote
Mmemme iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF
Enwere Ihe abụọ doro anya ikpebi ịwụnye ụdị sọftụwia a na kọmpụta anyị. Nke mbụ bụ nkasi obi: ọ bụrụ na anyị ga -eme ọtụtụ ntụgharị, ọ kacha adaba. Nke abụọ, mana ọbụghị obere, bụ ajụjụ nke nzuzo. Site na mmemme ndị a, akwụkwọ ahụ na -anọ oge niile na kọmputa. Ndị a bụ ndị a na -ejikarị:
Ihe Ntụgharị Altarsoft PDF
Ihe Ntụgharị Altarsoft PDF, dị mfe ma dịkwa irè
Ọ bụ ngwanrọ dị mfe nke nwere ọtụtụ afọ n'azụ ya, mana ọ na -eme ihe niile ị ga -atụ anya n'aka onye ntụgharị ụdị ya. Ihe Ntụgharị Altarsoft PDF Ọ bụ n'efu ma dịkwa mfe iji, n'agbanyeghị na o nwekwara ụfọdụ njedebe. Dịka ọmụmaatụ, ọ na -enye gị ohere ịtụgharị otu onyonyo n'otu oge. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na anyị ga -eji ọtụtụ faịlụ rụọ ọrụ.
Budata njikọ: Ihe Ntụgharị Altarsoft PDF
Ihe Ntụgharị PDF IceCream
Ngwa ngwa ma dịkwa mfe iji. Na Ihe Ntụgharị PDF IceCream enwere ike ịgbanwere ọnụọgụ onyonyo buru ibu naanị site na ịdọrọ na dobe. Usoro ihe omume a nwekwara nhọrọ nzuzo dị ụtọ.
Ekwesịrị ikwu na ụdị nnwale ahụ na -edobe oke: peeji 5 n'otu akwụkwọ PDF yana faịlụ 3 n'otu ntughari. Iji kpochapụ ihe mgbochi ndị a, ọ nweghị nhọrọ ọzọ ma ọ bụghị ịnweta ụdị akwụ ụgwọ.
Budata njikọ: Ihe Ntụgharị PDF IceCream
JPG ka Ihe Ntụgharị PDF
Nhọrọ bara uru ma kwụ ọtọ. Site na ntinye dị mfe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ spartan, JPG ka Ihe Ntụgharị PDF A na -enye ya ka ọ bụrụ ngwa ọrụ na -atọ ụtọ maka ọrụ ịtụgharị foto ka ọ bụrụ PDF. Tụkwasị na nke ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, ọ na -enye anyị ohere ịhọrọ ogo onyonyo n'ime oke na -aga site na 0 ruo 100%. N'ezie, ụdị nnwale nnwere onwe dị naanị ụbọchị iri na ise. Mgbe oge a gachara, ị ga -aga na nke ịkwụ ụgwọ iji gaa n'ihu na -eji ngwanrọ a.
Budata njikọ: JPG ka Ihe Ntụgharị PDF
Ihe ntụgharị PDF nke TalkHelper
Mmemme ọzọ bara ezigbo uru iji tọghata onyonyo na PDF, n'agbanyeghị na anyị ga -ahụ naanị nhọrọ efu na ụdị nnwale ya. Nke a na -enye anyị ntụgharị nke nwere ibe 10 kacha ma nsonaazụ ya nwere akara mmiri.
Na mkpokọta, ịba uru nke Ihe ntụgharị PDF nke TalkHelper enweghị ajụjụ: ọ na -enye gị ohere ịgbanwe faịlụ onyonyo (JPG, PNG, TIFF, BMP na GIF) ngwa ngwa ka ọ bụrụ PDF wee gbanwee faịlụ Okwu, Excel, PPT na DWG ka ọ bụrụ PDF.
Budata njikọ: Ihe ntụgharị PDF nke TalkHelper
Weebụsaịtị maka onyonyo n'ịntanetị ka ntụgharị PDF
Usoro a siri ike karịa nke anyị gosipụtara na ngalaba bu ụzọ. A na -eme ntụgharị online, n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, ọ dịghị mkpa iji wụnye mmemme nke nwere ebe nchekwa na ngwaọrụ anyị.
Naanị ọghọm ya bụ na enwere ike imebi nzuzo nke akwụkwọ anyị ma ọ bụrụ mwakpo kọmputa. Nke ahụ na -eme webụsaịtị ndị a enweghị ike ịhụ maka ojiji na gburugburu ọkachamara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ adịchaghị mkpa, saịtị ọ bụla na -esote bụ ezigbo nhọrọ.
Site na Docupub ị nwere ike izipu njikọ nbudata nke onyonyo na PDF na email ọ bụla
Usoro nke ịtụgharị foto na PDF site na DOCUPUB ọ dị nfe n'ezie. Site na ibe a, anyị nwere ike ịtụgharị ma onyonyo dị n'ụdị PNG na JPEG ka ọ bụrụ PDF na usoro atọ: nke mbụ, anyị ga -ahọrọ ụdị Acrobat nke anyị chọrọ ka ọ dakọrịta, wee chọta faịlụ ahụ na faịlụ anyị (ruo 24 MB ) na n'ikpeazụ anyị họrọ usoro mbupu.
Ee, usoro mbupu. Ma nke a bụ njirimara na -eme ka onye ntụgharị a dị iche na ndị ọzọ: anyị nwere ike izipu njikọ nbudata na email ọ bụla.
Weebụsaịtị a na -achịkọta ọtụtụ ọrụ na echiche maka ijikwa akwụkwọ PDF zuru oke. N'ezie, ọ gụnyekwara ihe ntụgharị faịlụ maka usoro ndị ọzọ (yana maka onyonyo). Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịgbakwunye MGBE na ndepụta anyị.
Ụdị n'efu nwere ụfọdụ adịghị ike, n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, naanị ị nwere ike iji weebụ ugboro abụọ n'ụbọchị, yana faịlụ ruru 10MB yana karịa ibe 50 n'otu faịlụ. Ma ọ na -arụ ọrụ nke ọma.
Foto dị na PDF Ihe Ntụgharị
Img ka PDF Ntụgharị
Ọ bụ otu n'ime webụsaịtị mbụ pụtara ka ha na -eme ụdị mgbanwe a, mana n'agbanyeghị na ọ ka bụ nke kacha mma. Ikekwe interface ya abụghị nke kachasị mma, mana ọ na -arụ ọrụ dịka o kwesịrị: ya na Foto dị na PDF Ihe Ntụgharị ụdị onyonyo a na -ahụkarị nwere ike gbanwee ka ọ bụrụ PDF. Nke kachasị mma: ọ na -enye nlele iji lelee ka PDF ga -adị tupu ntụgharị. N'ezie, ị ga -eji aka gị rụọ ọrụ ahụ, faịlụ site na faịlụ. Ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ na ogbe.
Njikọ: Foto dị na PDF Ihe Ntụgharị
Mgbakwunye nke nchekwa na nzuzo site na iji Smallpdf
Karịa maka arụmọrụ ya, anyị ga -etinyerịrị webụsaịtị a na ndepụta nhọrọ anyị iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF maka ihe gbara ọkpụrụkpụ: ọ bụ otu n'ime ole na ole na -etinye azịza dị mma maka nsogbu nzuzo. NA Obere mpempe Ọ na -eme ya site na isoro usoro dị mfe: itinye a izo ya ezo na iji SSL izo ya ezo maka faịlụ niile. Otu elekere ka ebugochara web, a na -ehichapụ ihe ndị a na -akpaghị aka.
Enwere ike iji ọrụ Smallpdf n'ime oge nnwale n'efu maka ụbọchị 14.
Njikọ: Obere mpempe
N'ikpeazụ, anyị ga -enyocha ụdị ngwaọrụ ọzọ iji gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF. Kpọmkwem, ngwa ekwentị mkpanaaka. A na -ejikarị ngwa ndị a ebudata ma na -ebudata ngwa ndị a, n'ihi na ọtụtụ anyị niile na -eji ekwentị anyị eme ihe. Ị mara na ekwentị mkpanaaka dị ka obere kọmpụta anyị bu n’akpa anyị.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ, ngwa ọhụrụ nwere ọrụ na ohere ọhụụ na -apụta mgbe niile ma a bịa nyocha nyocha na ntụgharị. Ndị a bụ ihe kachasị mma n'oge a:
Evernote Scannable, dị naanị maka iPhone
Ngwa a na -enye anyị ohere inyocha ụdị onyonyo niile ozugbo, site na kaadị azụmahịa ma ọ bụ nnata, ruo eserese na foto. Ọ na -arụ ọrụ na sistemụ nchekwa na nhazi akpaka nke onyonyo yana ntụgharị ntụgharị ha na PDF. Maka ugbu a Nyocha Evernote dị naanị maka ndị ọrụ iPhone na iPad
Njikọ: Nyocha Evernote
Igwe nyocha dị mfe mana dị mma iji nyochaa ụdị akwụkwọ niile wee tụgharịa ha na PDF. Naanị maka ndị ọrụ iPhone. Na Lens Microsoft Office Enwere ike ịchekwa nsonaazụ ntụgharị na Otu Ndetu ma ọ bụ n'otu Drive. Na mgbakwunye, ọ na -enye ohere iji dezie onyonyo na ngwaọrụ dị mfe.
Njikọ: Lens Microsoft Office
PDFElement, ngwa kachasị mma maka ịtụgharị onyonyo na PDF
Eleghị anya ngwa kachasị mma mgbe a bịara n'ịtụgharị onyonyo ka ọ bụrụ PDF. Ma nke ahụ bụ, PDFElement Ọ bụghị naanị na -elekọta usoro ntụgharị, ọ na -enyere anyị aka n'ịgụ na idezi akwụkwọ PDF anyị.
Na mgbakwunye na nke a, ngwa a na -enye gị ohere ịkekọrịta akwụkwọ PDF na igwe ojii ngwa ngwa site na iji otu akaụntụ ga -aba uru maka Windows, macOS X, iOS na gam akporo. N'etiti uru ndị ọzọ, PDFElement dị n'ọtụtụ asụsụ ma tinye sọftụwia pụrụ iche iji zoo paswọọdụ onye ọrụ na onye nwe ya.
Jiri Scanbot tụgharịa foto ka ọ bụrụ PDF
Dị ka nhọrọ gara aga, ọ bụ nyocha, mana ọ bara uru maka ọrụ ịtụgharị onyonyo na PDF. Nyocha Ọ pụtara ihe niile maka nkenke ya na ịdị elu ya. Ọ dịkwa mfe iji: nke mbụ ị ga -atụ igwefoto igwefoto ekwentị na onyonyo wee malite usoro na -akpaghị aka. N'ikpeazụ, anyị nwere nhọrọ iwepụta nyocha ahụ wee dezie ya na -amasị anyị. Maka nke a, Scanbot nwere ụdị agba anọ, nchapụta na iche.
Ngwá ọrụ dị ukwuu n'aka gị nke na -enwe ọmarịcha ewu ewu (ihe karịrị nde mmadụ 20 na -arụsi ọrụ ike n'ụwa niile).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Tụgharịa foto ka ọ bụrụ PDF n'efu: ibe weebụ kacha mma
Otu esi etinye mkpụrụedemede ọzọ na Okwu